Somali News – Page 194 – Banaadir weyne
Xildhibaan Odawaa oo ku eedeeyay dowladda Federaalka inay hor-istaagtay Mashaariic laga fulin lahaa Galmudug
06/01/2019 Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo dhowaan kormeer ku tagay deegaano ka tirsan Galmudug ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, isagoo shir jaraa’id oo uu maanta qabtay kaga warbixiyay xaalada ka jirta deegaankaas. Xildhibaan Odawaa ayaa sheegay in muddo todobaad uu ku sugnaa Galmudug, isla markaana uu tagay magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Gaalkacyo iyo deegaano kale, waxaa uu ...
Wasiiro u socday Garowe oo loo diiday inay tagaan Magaaladaasi
06-01-2019 Puntland ayaa ku wargelisay xubno ka socday Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo Garowe ku wajahnaa in aysan ka soo duuli karin garoonka diyaaradaha Aadan oo ay mudda saacado ah ku xayiran yihiin. Dadaallo ay sameeyeen qaar ka mid ah Isimada Puntland oo lagu doonayay in mas’uuliyiinta loo ogolaado ayaa fashil ku dhammaaday, sida ilo wareedyo ay xaqiijinayaan. Go’aankan mamnuucista ...
Howlgal ka socda degmada Afgooye
06-01-2019 Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan Howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Howlgaladaan ayaa yimid ka dib markii maalmihii lasoo dhaafay Magaalada ay ka dhacaayeen dilal qorsheysan oo loo geystay Askar iyo dad Shacab ah. Howlgaladan oo ay sameynayaan Ciidanka Amaanka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka ...
Kooxo Hubeysan Oo Xalay Dil Ka Geystay Dharkenley
06/01/2019 Muqdisho – Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil Xalay Wiil Dhalinyaro ahaa loogu geystay gudaha degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir. Dilka ayaa ka dhacay Isgoyska Xoosh oo ka tirsan degmadaasi, sida ay xaqiijiyeen dad Goobjoogayaal. Dabley hubeysan ayaa la sheegay in Toogasho ay ku dileen Marxuumka, kadibna ay goobta isaga baxsadeen. Ciidamo ka tirsan Booliska ...
Madaxweyne Farmaajo oo la sheegay in uu wado Hab dhaqan ku saleysan Aargoosi
06/01/2019 Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu wado hab dhaqan u muuqda mid aargoosi ah uu ku beegsanayo cid alle cidii ka qeyb gashay Heshiiskii Kampala Accord . Xildhibaan C/fataax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha sare ee Xisbiga UPD ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu aargoosi ku wado dadka uu tuhmayo ...
Xasan Sheekh oo ku eedeeyay Maamulka Madaxweyne Farmaajo caburin iyo cabsi gelin
06/01/2019 Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay wado caburin iyo cabsi gelin, isagoo ku baaqay in wax laga bedelo hab dhaqanka siyaasadda iyo sida ay hadda wax u socdaan. Isagoo ka hadlayay Munaasabad lagu furiyay xarun uu yeelan doono Xisbiga uu hoggaamiyo ee UDP ayaa waxaa ...
Antonio Gutters “Eryintii Soomaaliya ay erisay wakiilkii QM ma waafaqsana Dublamaasiyadda Caalamiga ah…”.
05/01/2019 FILE PHOTO: Berlin, Germany – November 04: Antonio Guterres, High Commissioner for Refugees of UNHCR, attends a press conference in German Foreign Office on November 04, 2015 in Berlin, Germany. (Photo by Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images) Muqdisho – Xogahaya guud ee QM Antonio Gutters ayaa sheegay in Go’aanka Dowladda Soomaaliya ay ku erisay wakiilkiisii uusan ...
C/fataax Geesey “Farmaajo Dastuurka lagu doortay waa diiday, waa in aan is difaacnaa”
05-01-2019 Xildhibaan C/fataax Ibraahim Geesey oo bishii hore iska casilay xilkii Wasiirka Howlaha Guud ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu ku xadgudbay Dastuurka. C/fataax Geesey ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu diiday Dastuurkii lagu doortay iyo diinta, waxaa uu sheegay in wax kasta ee dhibaato ka dhacday Baydhabo uu mas’uuliyadeeda qaadayo Madaxweyne Farmaajo. “Farmaajo waa diiday ...
Abdirahman Abdishakur oo shaaciyay sadex Sabab uu u taageeri waayay Go’aankii dowlada ku ceyrisay Haysom
05-01-2019 Abdirahman Abdishakur Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta Mucaarad ku ah dowlada uu Hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay sababaha uu u taageeri waayay go’aankii dowlada dalka uga ceyrisay Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Abdirahman Abdishakur ayuu kusoo bandhigay sadex arimood uu sheegay in sabab u yihiin in uu taageeri waayo ...
05/01/2019 Muqdisho (SONNA) – War qoraal ah oo ka soo baxay Maamulka Dekedda Muqdisho ayaa lagu faah faahiyay adeegyo ay bilaabayso shirkadda MAERSK LINE oo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa daabulaada Kunteenaradda. Qoraalka ka soo baxay maamulka Dekedda Muqdisho oo laguna wargelinayaya ganacsatada Soomaaliyeedd ayaa ayaa u qornaa sida tan. Waxaan la socodsiinaynaa Ganacsatada iyo Shacabka Soomaaliyeed ...